Igama lesiqhelo: isitofu sokugonya se-pneumococcal polysaccharides (PPSV), 23-valent (NOO moe KOK al POL ee SAK ukukhwela, 23-VAY mboleko)
Igama lebrand: IPneumovax 23
Udidi lweziyobisi: Amachiza okugonya
By Kendra Cherry; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz ngo-Oktobha 7, 2020. Ibhalwe nguCerner Multum.
Yintoni ugonyo lwe-pneumococcal polysaccharides (PPSV)?
Isifo se-pneumococcal sisifo esibi esibangelwa yintsholongwane. Iibhaktheriya ze-Pneumococcal zinokuchaphazela iisono kunye nendlebe yangaphakathi. Inokuchaphazela nemiphunga, igazi, kunye nengqondo kwaye ezi meko zinokubulala.
I-Pneumococcal polysaccharides vaccine (PPSV) isetyenziselwa ukuthintela usulelo olubangelwa yintsholongwane ye-pneumococcal. I-PPSV iqulethe ezingama-23 zeentlobo eziqhelekileyo zebacteria ye-pneumococcal.
I-PPSV isebenza ngokukuveza kumthamo omncinci webhaktiriya okanye iprotein evela kwintsholongwane, ebangela umzimba wakho ukuba ukhusele esi sifo. I-PPSV ayizukunyanga usulelo olusebenzayo esele luphuhlile emzimbeni.
I-PPSV isetyenziselwa kuphela abantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka emi-2 ubuncinci ubudala. Kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala, kuye kwathathwa esinye isitofu sokugonya Ngaphambi (isitofu sokugonya se-pneumococcal conjugate [PCV] 7-valent) siyasetyenziswa, esihlala sinikwa phakathi kweminyaka emi-2 neenyanga ezili-15.
Njengaso nasiphi na isitofu sokugonya, i-PPSV ayinakho ukukhusela kwizifo kuye wonke umntu.
I-PPSV kufuneka inikwe ubuncinci iiveki ezi-2 ngaphambi kokuqala kwalo naluphi na unyango olunokuwenza buthathaka amajoni akho omzimba. I-PPSV inikwa ubuncinci iiveki ezi-2 ngaphambi kokuba wenze i-splenectomy (ukususwa ngotyando).
Ixesha lokugonywa libaluleke kakhulu ukuze lisebenze. Landela imiyalelo kagqirha.
Usengalifumana ugonyo ukuba unengqele okanye umkhuhlane. Kwimeko yesifo esibi kakhulu ngenxa yomkhuhlane okanye naluphi na uhlobo losulelo, linda ude ube bhetele ngaphambi kokufumana eli chiza.
Akufanele ufumane isitofu sokugonya esikhuselayo ukuba ubunobungozi obusongela ubomi emva kokudubula kokuqala.
Gcina umkhondo wazo naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga emva kokufumana eli chiza. Ukuba ukhe ufune ukufumana idosi yokunyusa, kuya kufuneka uxelele ugqirha wakho ukuba ukudubula kwangaphambili kubangele naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga.
Ukungenwa sisifo se-pneumococcal (njenge ukukrala kwemiphunga okanye meningitis ) iyingozi kakhulu kwimpilo yakho kunokufumana eli chiza. Nangona kunjalo, njengalo naliphi na iyeza, eli chiza linokubangela iziphumo ebezingalindelekanga kodwa umngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga usezantsi kakhulu.
Akufanele ufumane olu gonyo ukuba ukhe wasongela ubomi bakho nakuphi na ukugonya kwe-pneumococcal polysaccharides.
Phambi kokufumana eli chiza, xelela ugqirha wakho ukuba ngaba awudibani nalo naliphi na ichiza, okanye ukuba wopha okanye unengxaki yokunqanda igazi efana nehemophilia, okanye ukugruzuka ngokulula.
Ixesha kunye nenani lamayeza e-PPSV owafumanayo aya kuxhomekeka ekubeni unayo nayiphi na le miqathango:
umhlaza, wegazi , i-lymphoma, okanye i-myeloma eninzi;
Intsholongwane kaGawulayo okanye uGawulayo;
imeko yezintso ebizwa nephrotic yesifo ;
imbali yokufakelwa komzimba okanye ithambo;
ukuba ufumana ichemotherapy;
ukuba usebenzisa iyeza le-steroid ixesha elide;
ukuba ucwangciselwe ukuba ususwe udakada (splenectomy); okanye
ukuba ufumene isitofu sokugonya se-pneumococcal kwisithuba seminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 edlulileyo.
Izitofu zokugonya zinokuba yingozi kusana olungekazalwa kwaye ngokubanzi akufuneki zinikwe owasetyhini okhulelweyo. Nangona kunjalo, ukungamgomi umama kunokuba yingozi ngakumbi emntwaneni ukuba umama wosulelwa sisifo esinokusithintela. Ugqirha wakho uya kuthatha isigqibo malunga nokuba kufuneka ulifumane na eli chiza, ngakumbi ukuba unengozi enkulu yosulelo lwesifo se-pneumococcal.
Ayaziwa nokuba iPPSV idlula kubisi lwebele okanye ukuba ingonzakalisa umntwana owanyayo. Sukusebenzisa eli yeza ngaphandle kokuxelela ugqirha wakho ukuba uncancisa umntwana.
Unikwa njani lo mgonyo?
I-PPSV inikwa ngenaliti (ngokudutyulwa) phantsi kolusu okanye kwimisipha yengalo okanye ethangeni. Uya kufumana le naliti kwiofisi kagqirha okanye kwenye indawo yaseklinikhi.
I-PPSV ihlala inikwa njengokugonya okuqhelekileyo kubantu abadala abaneminyaka engama-65 nangaphezulu.
I-PPSV inokunikwa nabantu abaphakathi kweminyaka emi-2 ukuya kwengama-64 ubudala:
isifo sentliziyo, isifo semiphunga, okanye isifo seswekile;
ukuvuza kwamanzi kwi-cerebrospinal fluid, okanye ukufakela i-cochlear (isixhobo sokuva nge-elektroniki);
utywala okanye isifo sesibindi (kubandakanya ukuqina kwesibindi );
isifo se-sickle cell okanye ukuphazamiseka kwepeni;
amajoni omzimba abuthathaka abangelwa yi-HIV, i-AIDS, umhlaza, ukusilela kwezintso ukufakelwa komzimba, okanye udakada owonakeleyo; okanye
amajoni omzimba abuthathaka abangelwa kukuthatha i-steroids okanye ukufumana ichemotherapy okanye unyango ngemitha.
I-PPSV inokunikwa nabantu abaphakathi kweminyaka eli-19 ukuya kwengama-64 ubudala abatshayayo okanye abanayo umbefu .
Ugqirha wakho unokucebisa ukunyanga umkhuhlane kunye nentlungu nge Iasprini -ukukhulula iintlungu ezifana ne acetaminophen ( UTylenol ) okanye ibuprofen ( Imotrin , Yimbi , kunye nabanye) xa kunikezelwa umfanekiso kunye neeyure ezingama-24 ezizayo. Landela izikhokelo zeleyibhile okanye imiyalelo kagqirha wakho malunga nokuba ingakanani iPneumovax 23 yokuthatha.
Ukuba ugqirha wakho umisele i isibulali zintsholongwane (njengepenicillin) ukunceda ukuthintela usulelo nge-pneumococcal bacteria, ungayeki ukusebenzisa i-antibiotiki emva kokufumana i-PPSV. Thatha i-antibiotic ubude bexesha elimiselweyo ngugqirha wakho.
Uninzi lwabantu lufumana iPPSV enye kuphela ngexesha lokudla kwabo ubomi. Nangona kunjalo, abantu abakwiminyaka ethile yobudala okanye abanezifo ezithile ezibabeka emngciphekweni wosulelo banokufuna ukufumana isitofu sokugonya esingaphezulu kwesinye. Ngaphambi kokuba ufumane eli chiza, xelela ugqirha wakho ukuba ufumene isitofu sokugonya se-pneumococcal kwisithuba seminyaka emi-3 ukuya kwemihlanu edlulileyo.
Kuba i-PPSV ihlala inikwa kube kanye, ngekhe ubekhona kwishedyuli yokulinganisa. Ukuba ufumana i-PPSV ephindiweyo, qiniseka ukuxelela ugqirha wakho ukuba ibingaphantsi kweminyaka emi-5 okoko wagqibela ukufumana isitofu sokugonya se-pneumococcal.
Ukugqithisa kwesi sitofu akunakwenzeka ukuba kwenzeke.
Yintoni ekufuneka ndiyiphephe ngaphambi okanye emva kokufumana eli chiza?
Landela imiyalelo kagqirha wakho malunga nayiphi na imiqobo ekutyeni, kwiziselo, okanye emsebenzini.
Iziphumo ebezingalindelekanga zokugonya
Ukosulelwa sisifo se-pneumococcal (esifana ne-pneumonia okanye i-meningitis) kuyingozi kakhulu kwimpilo yakho kunokufumana eli chiza. Nangona kunjalo, njengalo naliphi na iyeza, eli chiza linokubangela iziphumo ebezingalindelekanga kodwa umngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga usezantsi kakhulu.
Fumana uncedo lonyango olungxamisekileyo ukuba unayo enye yezi iimpawu uxabane: urhwebo ; ubunzima bokuphefumla; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Biza ugqirha wakho kwangoko ukuba unesiphumo esibi njenge:
umkhuhlane ophezulu (i-103 degrees okanye ngaphezulu);
ukugruzuka okulula okanye ukopha;
amadlala adumbileyo nge irhashalala okanye ukurhawuzelela, iintlungu ezidibeneyo, kunye nokugula ngokubanzi;
ulusu olumhlophe okanye olutyheli, umchamo omnyama, ukudideka okanye ubuthathaka;
ukuba ndindisholo Ukuziva ubambe iinyawo zakho kwaye usasaza phezulu, iintlungu ezisezantsi ezisezantsi;
utshintsho kwindlela yokuziphatha, iingxaki ngombono, intetho, ukugwinya, okanye isinyi kunye nokusebenza kwamathumbu; okanye
ukubetha kwentliziyo kancinci , unengxaki yokuphefumla, uziva ngathi ungaphuma.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezingathandekiyo zinokwenzeka, njenge:
umkhuhlane ophantsi (i-102 degrees okanye ngaphantsi), ukugodola, ukudinwa;
ukudumba, iintlungu, ukuthamba, okanye ubomvu nokuba kuphi emzimbeni wakho;
intloko ebuhlungu , isicaphucaphu , ukugabha ;
intlungu edibeneyo okanye yemisipha;
ukudumba okanye ukuqina engalweni okanye emlenzeni iyeza lalitofelwe;
irhashalala eluswini; okanye
Ubuhlungu obufudumeleyo, ukufudumala, ukuba bomvu, ukudumba, okanye iqhuma elilukhuni apho sanikezelwa khona.
Olu ayilo luhlu olupheleleyo lweziphumo ebezingalindelekanga kwaye ezinye zinokwenzeka. Biza ugqirha wakho ufumane iingcebiso zonyango malunga neziphumo ebezingalindelekanga. Unokuxela iziphumo ebezingalindelekanga kwiSebe lezeMpilo laseMelika kunye neeNkonzo zoLuntu e-1-800-822-7967.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela isitofu sokugonya se-pneumococcal polysaccharides (PPSV)?
Phambi kokufumana olu gonyo, xelela ugqirha ngazo zonke ezinye izitofu osandula kuzifumana.
Xelela ugqirha ukuba usandula ukufumana iziyobisi okanye unyango olunokuthi buthathaka amajoni omzimba, kubandakanya:
umlomo, umlomo, impumlo, okanye iyeza leyeza le-steroid;
amayeza okunyanga Psoriasis , isifo samathambo, okanye ezinye Ukuphazamiseka komzimba , ezinje nge-azathioprine ( Imuran ), etanercept ( Ungenelelo ), ngocomocide ( Arava ), kunye nabanye; okanye
amayeza ukunyanga okanye ukuthintela ukungamkelwa komzimba, njenge-basiliximab (Simulect), cyclosporine (ISandimmune, Neoral, Gengraf), muromonab-CD3 (Orthoclone), mycophenolate mofetil ( CellCept ), mnqambi (Rapamune), okanye itrolrolimus ( Prograf ).
Ukuba usebenzisa naliphi na lala mayeza, ngekhe ube nakho ukufumana isitofu sokugonya, okanye kungafuneka ulinde de kugqitywe olunye unyango.
Olu luhlu alugqitywanga kwaye ezinye iziyobisi zinokusebenzisana nePPSV. Xelela ugqirha wakho ngawo onke amayeza owasebenzisayo. Oku kubandakanya ukumiselwa, i-counter-counter, i-vitamin, kunye iimveliso zemifuno . Musa ukuqala iyeza elitsha ngaphandle kokuxelela ugqirha wakho.
Ugqirha wakho okanye usokhemesti unokufumana ulwazi olongezelelweyo malunga nokugonya kwe-pneumococcal polysaccharides. Unokufumana ulwazi olongezelelekileyo kwisebe lezempilo lendawo yakho okanye amaZiko oLawulo noKhuseleko lweZifo.
ipilisi emhlophe ip 109
iintlungu ezisekunene ezantsi kweembambo
ukuqala umsebenzi omtsha
Imoto ayiqali kodwa ucofa
Ngaba i-hydrocodone inayo ikhowudi kuyo
iinyani zokuvavanywa kweziyobisi